- कला मा एक धेरै असामान्य प्रवृत्ति को उद्भव देखि गत शताब्दीको लागि futurism। यो क्रान्तिकारी प्रवृत्ति विद्रोही शताब्दीको प्रभाव अन्तर्गत खडा भएको छ। प्रारम्भिक XX सताब्दी को मालिकको, urbanization र प्राविधिक प्रगति को विकास संग सम्बन्धित जीवनशैली चित्रण गर्न, अगाडी सार्न खोजे। समय धेरै चित्रकारों यो दिशा मा आफ्नो हात खोजे। तर इटालियन कलाकार अम्बर्टो Boccioni - संस्थापक, पिता, को ideologue, प्रतिमा Futuristic शैली।
दक्षिणी इटाली Reggio कालाब्रिआ, जन्म इटालियन कलाकार Bochchini (1882) को सानो गाउँमा। आफ्नो आमाबाबु उत्तरी इटालियन क्षेत्रबाट थिए - Romagna। अक्सर, परिवार अर्को एक शहर देखि सारियो, र अन्तमा केटानिया शहर मा बसे। यहाँ केटा आफ्नो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, तर पनि राम्रो कला कुनै पनि संलग्न छैन। 1901 मा रोममा बसे र असल ikusstva को एकेडेमी प्रविष्ट गर्नुभयो।
Severini - यो अम्बर्टो Boccioni एक Futuristic दिशा मा आफ्नो सह-लेखक भेट, रोम थियो। तिनीहरू दुवै प्रसिद्ध कलाकार Dzhakomo Balla, जवान pointillism को प्रविधी सिकेको जसमा सिकाउनुभयो। कि Boccioni इटाली विस्तार यात्रा पछि, उहाँले पेरिस भ्रमण र रूस गर्न यात्रा। इटालियन कलाकार प्रभाववाद को विशेषताहरु संग सामना गर्नुपरेको थियो। मिलान, अम्बर्टो Symbolist कवि Marinetti थाह। उहाँले फ्रान्सेली समाचार पत्र Futuristic मेनिफेस्टो मध्ये प्रकाशित गर्नेछ। Boccioni आफ्नो अनुयायी बने।
सुरु के अम्बर्टो Boccioni संग? तस्वीर सानो स्ट्रोक शुद्ध hues तिनीहरूलाई प्रयोग विभिन्न प्रारम्भिक अवधि। सुरुमा यी पोट्रेट थिए। पहिलो काम को चित्रकार थिए निहित सुविधाहरू थप पुरानो इटालियन कला, तिनीहरूले भिन्नता देखि फ्रान्सेली उन्नत रुझान, प्रेरित द्वारा क्रान्तिकारी मनसाय। रोम मा, अम्बर्टो कसरी nudes आकर्षित गर्न सिक्न सकें। र त त्यो Futuristic चित्रकला आए।
एक जवान Boccioni को सबै भन्दा प्रसिद्ध काम - "पाओलो र Francesca"। यो प्रेमको अनन्त विषय समर्पित छ, गतिशील र गेय रेखाहरू मर्ज। कला सबै सामान्य धारणाहरु कलाकार गरेको एक प्रारम्भिक चित्र देख, परिवर्तन गर्दै "हाँसो।" लेखक को धेरै स्मरणीय काम चित्रकला छ "प्राण को राज्य।" उनको मास्टर मा, विश्व अस्तव्यस्त लाइनको आफ्नो दृष्टि खिच्ने मान्छे, कार, पशु reminiscent सक्षम थियो। अम्बर्टो Boccioni ती अस्पष्ट तथ्याङ्कले clouded को सहज कला संसारमा हुन्छन्।
कलाकार को मुख्य विशेषताहरु
एक Futuristic मेनिफेस्टो Marinetti को नुस्खे पालना गर्न Boccioni धेरै लामो समय। को संरचना को आफ्नो काम निहित incompleteness, वरपरको स्पेस पारदर्शिता। आफ्नो चित्रहरु रंग लेखन मा मुख्य समस्या बरु फारम भन्दा, हल छन्। आफ्नो काम मा, मास्टर सबै असंगत जडान गर्न सकिएन। यी विचारहरू नयाँ दिशा कला धक्का - पप कला। इटालियन सेलिब्रेटीहरू लागि प्रेरणा विज्ञान, प्रविधि, dynamism, गति, इच्छा बाँच्न थिए।
पछि कलाकार को भविष्य सुविधाहरूमा एक सानो घनभएको को तत्व थप्छ। स्थिर तत्व, ज्यामितियआकार Monumental काम संलग्न। आफ्नो चित्रहरु मा Boccioni सबै देखेको र एक एकाइ रूपमा मूर्त बित्यो। शहर को Bustle - आफ्नो सिर्जनाहरू को मुख्य विषयवस्तु। भताभुङ्ग vortices, असामान्य आकार, रंगीन अनुहार टुक्रा। आफ्नो काम एक बच्चाको कलाइडोस्कोप मा चित्र संग तुलना गर्न सकिन्छ। आन्दोलन - कि जीवन र उल्लेखनीय इटालियन कलाकार को काम को अर्थ हो।
मूर्तिकला काम विजार्ड
धेरै बहुमुखी व्यक्तित्व अम्बर्टो Boccioni थियो। मूर्तिहरु पनि ठूलो मालिकको को कार्यहरूमा भयो। यस स्टूडियो गएर समय कलाकारहरूको Boccioni को भविष्य मूर्तिकला आफ्नो सिद्धान्तहरू लागू गर्न निर्णय गरेको छ मा धेरै प्रसिद्ध छ। उहाँले यो शैली मा धेरै काम प्रदर्शन र "Futurist मूर्तिकला को मेनिफेस्टो" लेखे। 1913 मा, कलाकार एक Futuristic अखबार मा प्रकाशित गर्न थाले। यसलाई मा, पूर्ण शक्ति उहाँले चित्रकला र मूर्तिकला मा फैशन आन्दोलन को विचार प्रचार। मास्टर विश्वास छ कि कुनै पनि चित्र वा मूर्ति - भावना को एक whirlwind एक प्रकारको। Vorticism - शब्द "whirlwind" बाट कला, अंग्रेजी नयाँ दिशा थियो। यो Boccioni यसको उद्भव गति दिए। Vorticism थप कोण मा, futurism भन्दा dynamism। अमूर्त कला यी दुई शैलीहरू ठाउँमा आए।
पहिलो विश्व युद्ध, यो चाँडै युरोप को सम्पूर्ण कब्जा गर्दा, यो हिंसा फैलाउने यसको ferocious अनुहार देखाए। अम्बर्टो Boccioni, नियमित सेना को स्वयंसेवक battalion मा enlisted अन्य futurists साथ। उहाँले युद्ध को सबै भयानक देख्न सक्थे। एक विज्ञप्ति मा कलाकार लेख्न र Futurism मा व्याख्यान गर्न छोडेनन्। को तोप ब्रिगेड एक मा अभ्यास समयमा अम्बर्टो आफ्नो घोडा को नियन्त्रण गुमायो र आफ्नो मृत्यु परे। उनको मृत्यु पछि, त कुनै एक Futurist आन्दोलन द्वारा लाग्यौं थियो, यो, आफ्नो जवान नेता गुमाउने संकुचन। Boccioni वर्ष मात्र 33 बस्थे।
शैली प्रभाववाद: प्रसिद्ध कलाकार द्वारा चित्रहरु
कला मा आधुनिक रुझान
एक्रिलिक कला: विशेषताहरु र सुविधाहरू
Blagoveshchensk मा सामुई पर्यटन मा भाडा को घर को
बागवानी रहस्य: प्रत्यारोपण लिली
Thuja Smaragd - गिरावट मा रोपण। एक पाँचौं Smagard कसरी रोपेर गर्न?
शीर्ष क्लब टम्स्क
मौलिक कम्प्यूटर विज्ञान र सूचना प्रविधि (विशेषता): काम गर्न कसलाई?
आँखा को दिन र साँझ बनाउन-अप
प्रोटिन आहार - राम्रो आंकडा गर्न प्रमुख
फाइबर लागि सबै भन्दा राम्रो वाइफाइ राउटर